Ukupheka akudingeki kuphela umphefumulo, kodwa ziphathiswe umcabango! Khona-ke, izitsha zakho will fly kude amatafula, nabangane uzobe elwela ukucela zokupheka isignesha isidlo. Kungani ungake uzinike uqaphele Gingerbread ephrintiwe? Mhlawumbe-ke kungenziwa ekhaya? Noma babe isanqante ezinhle iyanqo Tula? Kungani amakhekhe abo abadumile emhlabeni wonke futhi abenyukela lolu hlobo induku? Masizame lokumba umlando ukuthola iresiphi kuhle Gingerbread!
Lokhu ufulawa imikhiqizo confectionery, ogxile ukuhlolwa okukhethekile. Ukuze ukunambitheka kungenziwa wanezela amantongomane nezithelo candied, omisiwe izithelo jam noma uju. Komkhuba kithi ikhekhe has simise kancane convex kanye nephethini engxenyeni engenhla, okuyinto lisetshenziswa Uqweqwe. Umlando ubonisa ukuthi isanqante kuye kwaba ngemfanelo samaholide njalo, njengoba ukukhiqiza zawo zazilotshiwe izithako ezibizayo. Igama induku kusekelwe "okubabayo", okukhombisa ukuthi ngaphambilini nalokho kanye pepper.
Ngokokuqala ngqá e-Gingerbread okukhulunywa BC. Kwakumelwe uju amakhekhe, owayethandwa kakhulu nge nabaseGibhithe lasendulo. Roma cishe baqedele iresiphi: abawona nje elingenamikhono ngamaqebelengwane, kodwa futhi wabhaka amakhukhi ngokuqondile kusukela uju. Ngokuhamba kwesikhathi, izinyosi amakhekhe abizwa ngokuthi "lebkuhen". Namuhla, kuyinto German Christmas amakhukhi, ezidayiswa eBelgium. ERussia, ngokuthi Miodowa Gingerbread isinkwa. Babedalelwene ngengxube ufulawa rye uju kanye berry juice. Kamuva, i-yokuwenza buhlanjululwe amakhambi zasendle kanye izimpande.
Kusukela ngekhulu le-11 laqala ukuletha e izinongo Russian exotic kusukela e-Indiya naseMpumalanga Ephakathi. Khona ikhekhe lethiwa samanje. Palette flavour zincike isivivinyo kanye nezinongo wanezela. Yayithandwa emnyama, lemon, Mint, coriander, vanilla, ikhumini, ginger, amakinati nokuningi. Kwangaphandle palatability induku luzuzwe bangakunaki ukucutshungulwa zhzhonym ushukela.
Kusukela ngekhulu le-18, ukukhiqizwa kwe Gingerbread ithuthukiswe yonke indawo. Khona-ke okokuqala yazibiza Tula. Gingerbread ukuphrinta namanje kubhekwa umkhiqizo elite, kodwa ethengekayo. lapha kuphela abaqondi into eyodwa: yini Gingerbread ephrintiwe?
Lapha kubalulekile ukuba ukhulume izinhlobonhlobo izaqathi. Abakwazi ukuba kunyatheliswe, ukusika futhi olubunjiwe. Okuvame kakhulu - nje uzitholele Gingerbread, okuyinto kwenziwa yibhodi. Abakhi amabhodi ezinjalo ngokuthi Znamenshchikov. Basebenza ngomcako, kodwa ngezinye izikhathi asetshenziswa namathathu banesifo esibi birch kanye eliphakathi kwe. amabhodi Long asha ashisa zemvelo bese elingenamikhono nge resin noma wax. Wanyathelisa wesifunda ibhodi I-Gingerbread embozwe imidwebo ukuthi umdwebi enza-Umqophi.
ikhekhe Okuprintiwe kwadingeka zinhlobo ayo, elinye lawo kwaba "Overclocking". Lawo makhukhi abe umsebenzi semantic - the overstayers izivakashi wamnikela umphathi wabo, okusikisela ukuthi sekuyisikhathi ukwazi.
ikhekhe Okuqoshiwe zenziwe isikhunta metal. eqinile Ikakhulukazi lolu hlobo kwakuvamile North.
A uhlobo Gingerbread babe Russian "Roe". By endleleni, lokhu ingenye izimpawu of Pomerania. Ngokusho le ndlela yokukhiqiza cut-amakhekhe ne ukwengeza caramelised ushukela isiraphu. Bonke ngokucebile ukuhlotshiswa ngu ngesiswebhu amaprotheni mass nodayi.
Bewazi yini ukuthi e-Russia okunezinhlobonhlobo ezinonileyo Gingerbread? Kukhona ngisho eminye iminyuziyamu, okuyinto eminyakeni engaphezu kwamakhulu amathathu! Kukhona zigcinwa ziphephile yobudala efanayo, ne sohravnivshie owaqalwa noju iphunga. Nokho, ukunambitha lokhu ikhekhe is hhayi Kunconywa ngoba yenani zomlando, yebo, idwala ubulukhuni. Sekuyisikhathi eside Lezi amakhekhe yomile.
Kodwa abantu bakithi into eziyibonayo ungayididanisi izinto kancane futhi "Gingerbread" Museum edonsela abantu abavela emhlabeni jikelele. Namanje ukujabulela isidingo zasendle Gingerbread ezinyathelisiwe. Letinhlobo umkhiqizo wabo zingase zehluke, kodwa Tula Gingerbread kalula. Phela, lihlotshiswe ukubhala imilobo ngezihluthu. On lezi imidwebo zibonisa izinhlamvu lwasemaphusheni nemihlobiso asempumalanga. Ngezinye izikhathi kukhona Gingerbread elingenamikhono izingalo amadolobha noma ezinye izinhlamvu, ngokuvamile abonisa ukushisekela izwe.
Kodwa Ryazan ukwenza Gingerbread emise domes isonto futhi wambozwa nokucwebezela okuzothile emhlophe. Esikhathini inhlama engeza i-cumin bese anise, okuyinto ibangelwa ngenxa ekhethekile ukunambitheka kanye nephunga elimnandi izinti.
Ngaphambi safika iresiphi kanye sizame ukwenza Tula Gingerbread ekhaya. Nokho, olinganise ngqo, ngeke ukwazi ukucacisa, njengoba inkosi-Confectioners Tula uwagcine imfihlo futhi zadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. Nokho, eqondiswa ukunambitheka yakho siqu, ungakwazi uzame bona iresiphi Gingerbread okuyinto sasibhakwe iminyaka 300 edlule esifundazweni Tula.
Esikhathini bhotela elicibilikile, engeza uju liquid futhi amaqanda. Ngokuphelele phehla ingxube.
Eceleni hlenga ufulawa bese uxove inhlama emanzini ngosawoti.
Nemthombo kufanele bakhethe elula - apula ibhotela. By the way, ofakwe enjalo Thenga ukudayiswa Tula Gingerbread. Ekhaya, Uvarov apula noshukela bese ukuminyana obukhulu.
Unikezele ngezinsizakalo inhlama izingqimba ezimbili, bese esikhaleni phakathi laphakathi, beka ukugcwaliswa chilled. Manje bezikhali umvuzo, thumela it kuhhavini. ikhekhe Ready kuphole futhi amboze ocwebezelayo, bese kabusha thumela kuhhavini glaze yambamba, wayenza lukhuni.
Uma ungafunda indlela yokwenza Gingerbread ephrintiwe ke kuyoba kudingekile, futhi ukuphenya indlela yokwakheka ocwebezelayo, lapho isicelo izibalo. Ukuze kubalulekile ukuba ugaye ushukela amaqanda qanda, kancane kancane wanezela kuya ingxube ingxenye yesine spoon amazambane isitashi kanye kalamula. Ingqikithi yesisindo kufanele kube uqweqwe shiny. Yibeke isikhwama khekhe bese udweba amaphethini phezu kobuso Gingerbread. Uqweqwe Uqinisa ngokushesha okukhulu, kodwa siqiniseke ukuthi sikwazi, thumela ikhekhe kuhhavini. Namuhla, ngale ndlela wenza amaswidi ePoland, Belarus, Northern Europe. Nokho, ikhekhe European sifana isiphambano phakathi bhisikidi ibhotela isanqante yethu, ukuze "bomdabu" phesheya alihlangani.
Wanyathelisa isanqante umpheki kuyodingeka usebenzise ibhodi ekhethekile, kodwa namuhla zingathengwa ezitolo. Futhi, iresiphi angadida, unezela coriander, usinamoni, cardamom, amakinati kanye clove. Konke ixubene e grinder ikhofi. Nilungele "imimoya owomile 'uju nesinamoni sigcizelele ukuthi sibe okugeza amanzi, ushukela, ibhotela amaqanda. Massa ngeke sikhukhumale Foam. Kuyisibonakaliso - sekuyisikhathi ukususa ekushiseni ugovuze ku ufulawa.
Manje afinyelela ukubumba ibhodi wanquma inhlama kusukela okuhambisanayo ukubaluleka kumiswa. Mash umphetho izandla bese unikezele ngezinsizakalo namaqebelengwane amabili. IBhodi camera ngamafutha. Okuhle kunakho konke ukuthi corn, ngoba akusiyo okunomunyu isikhathi. Omunye ikhekhe ukufaka esikebheni isifaca okuhle ukuma. Ngo phakathi ukugxusha elele phezu - kungenye ikhekhe okungukuthi ixhunywe at emaphethelweni ngowokuqala. Workpiece priporoshit ufulawa bese ukuhlukanisa inhlama ngommese kwifomu nendawo etafuleni. Emaphethelweni Imi nendawo umkhiqizo ukubhaka. Bhaka emlilweni ophansi cishe ikota yebahlali ihora kude ngemoto. Gingerbread Ruddy udinga ukususa amafutha nopende ocwebezelayo.
Kusukela edolobheni amazinyo amnandi
Okuningi izinyo elimnandi kuvamile ukukhuluma ngezindawo Pokrovsky Gingerbread. Futhi kuyini na kuhle? Cover igama langempela lomuzi lo izinyo elimnandi, ngoba lapha ezizukulwaneni ngezizukulwane zokupheka ekhethekile ephrintiwe Gingerbread. Ngokwesiko benziwe izimboni ezincane wezandla. Ngezinye izikhathi kungcono ibhizinisi lomndeni kanye esikalini zokukhiqiza kunalokho nesizotha - acishe abe yizinkulungwane ezine amakhekhe ngesonto. Ukusebenzisa ukukhiqizwa zemvelo kuphela. Ayikho amafutha esundu, futhi esikhundleni uju essence ungeze uju yemvelo. Kodwa umehluko omkhulu kusukela Tula - ukungabi khona amaqanda ekuhlolweni, kanye inala izinongo.
Ngokuvamile Basil ikhekhe eqhathaniswa Tula, hhayi esivuna wangaphambili. Futhi iqiniso, ukuqhathanisa okunjalo ayifani, ngenxa induku has umlando walo, elaqala eminyakeni engamakhulu amabili edlule ifa Ukubala Baskakov. Phakathi ukupheka inhlama ukwakha wabhaka Gingerbread amabhodi mayelana 25 imizuzu. Phakathi nezinyanga zasehlobo, ubhake amaqebelengwane esime izilwane, futhi ngamaholide ebusika - ngesimo isihlahla sikaKhisimusi noma Santa Claus. Hlobisa imikhiqizo usebenzisa ukudla Umbala noma ocwebezelayo we amaqanda qanda noshukela oluyimpuphu. Lokhu ikhekhe zingagcinwa amasonto amathathu, kodwa kusobala ukuthi imali, ngoba flavour emangalisayo.
ikhekhe Shaped - kungcono simnandi kakhulu futhi nice uswidi, kodwa ngoba kungaba wethulwe ingane njengesipho. Libuye libe ukukhetha okuhle dessert idili zemikhosi. Uma ukusetshenziswa amabhodi olubunjiwe ukuthi khekhe master kungaba yisiphi chef. Bhaka Gingerbread amakhukhi lomshado, njengesipho, noma ngisho wake. Kuye imbangela, kudala ukuma induku futhi kuchazwe ukugcwaliswa yayo. simnandi kakhulu, kodwa hhayi amakhekhe eyiqiniso ubisi olujiyile. Ziyakwazi amnandi kakhulu, ngakho-ke kungcono ukuphuza itiye zabo ngaphandle ushukela. Ngaphezu kwalokho, kufunwe ezihlukahlukene, ukhilimu, Ukhastadi, lwesinaphi, futhi-ke, uju. Indlela ukudala Gingerbread akuyona yisikhathi, futhi namuhla kubonakala yokuqala ezintsha nezithakazelisayo.
Kukhona amafomu ezisetshenziswa kanye kuphela, futhi ngenxa yalokho ziye zaba okuyigugu ngokukhethekile. Ngokwesibonelo, isanqante, prepodnesonny uMbusi uNicholas II, waba inkosi ecacile sephrofayela ngaphezulu nangaphansi Tula kuchazwa master ngesikhathi Gingerbread isikhathi Crest yayo kanye ezibiyele Boris Yeltsin futhi uMbhishobhi Omkhulu Russian-Alexis II.
Delicious plus ewusizo - currant jam
Umlando kanye nokusungulwa. "Nutella" - elimnandi uswidi